एमआरआई मेसिन नबनाउने, एक करोड हालेर सुन्दरता बढाउने मेसिन ! « Bikas Times
एमआरआई मेसिन नबनाउने, एक करोड हालेर सुन्दरता बढाउने मेसिन !
हाकिमका आफन्तलाई नदुखाई रगत निकाल्नु पर्ने बाध्यता ! दुखेमा कारबाही
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोभिड महामारीमा अनुदानमा आएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको भनेर बिल बनाउने, सेकेन्ड ह्यान्ड पिसिआर मेसिन खरिद गरेर नयाँको मूल्य देखाउने, बिग्रेको एमआरआइ मेसिन त्यसै छाडेर फजुलमा एक करोड खर्च गरेर लेजर मेसिन खरिद गर्ने जस्ता दर्जन जति विवादका सम्बन्धमा छानविन गर्नु पर्ने मामिला त्यसै फिस्स हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
अस्पतालकी प्रमुख एआइजी डाक्टर आशा सिंहविरुद्ध केही समय अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधारसहित उजुरी परेको थियो । आफैं विवादमा पर्ने अख्तियार हिजोआज अनुसन्धान गर्ने काम पनि अरुलाई लगाएर आफू चाहिँ विलासी भएको बस्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालको मामिलामा पनि ठ्याक्कै त्यही देखियो । भन्नका लागि ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान…’ नाम छ । तर अनुसन्धान गर्ने बेला चाहिँ अर्कैलाई जिम्मेवारी दिने शैली अनुरुप अख्तियारले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भएको अनियमितताको जाँच गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी विश्वराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति बनाएर कात्तिकको पहिलो साता नेपाल प्रहरी अस्पताल पठायो । समितिमा डिआइजी वसन्त लामा, एसएसपीहरु पुजा सिंह र भिम ढकाल, डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेत छन् । अस्पतालमा डा.आशा सिंहका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्दा अनुसन्धानभरका लागि विदामा राख्ने वा अन्यत्रै हाजिर गर्न लगाउने वा अन्य केही उपायहरु गर्न सकिन्थ्यो । यो पटकको अनुसन्धान चाहिँ अस्पताल प्रमुख सिंहलाई प्रमाण मेटाउने अवसर दिए जस्तो देखियो ।
अस्पताल प्रमुखको कुर्सीमा पनि बसिरहने, उनीविरुद्ध त्यही कार्यालयमा गएर प्रमाण पनि खोज्नु पर्ने अमिल्दो र असुहाउँदो दृश्य प्रहरी अस्पतालमा देखिएपछि देख्नेहरु नै आश्चर्यमा परे ।
व्याचकै कुरा गर्दा आशा सिंहभन्दा एआइजी विश्वराज पोख्रेल कनिष्ठ पनि हुन् । त्यसमाथि एआइजी पोख्रेल कसैसँग पनि छुच्चो भएर व्यवहार नगर्ने, शान्त प्रकृतिका व्यक्ति हुन् । अर्थात एआइजी सिंहविरुद्धका प्रमाणहरु संकलन गरेर उनीसँग छुच्चे हुन चाहँदैनन् । प्रहरी अस्पताल जानुअघि नै पोख्र्रेलले ‘अस्पतालमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ र ? उपचार पो हुन्छ’ भन्ने धारणा बोकेर उनी प्रवेश गरेको स्रोतको दावी छ ।
प्रहरी अस्पतालभित्रका प्रमुख काण्ड यस्ता छन्ः
नेपाल प्रहरी अस्पताल पहिले देखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । अस्पतालका वरिष्ठ डिआइजी डा. मिनराज पाठकको पालो मिचेर जुनियर डिआइजी आशा सिंहलाई अस्पतालको प्रमुख बनाए पछि गुटको झगडा सुरु भएको भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । विगतमा यस्तो टिप्पणी हुने भए अहिले त्यस्तो छैन । स्रोत भन्छ– ‘यहाँ कुनै गुट छैन । अस्पताल प्रमुख सिंहका ‘यस म्यान’हरु सात जना जति छन् । बाँकी सबै उनीसँग रुष्ट छन् । पाँच छ सय कर्मचारी भएको अस्पतालमा सात जना एकातिर बाँकी अर्को तिर हुनुलाई गुट भन्न मिल्छ र ?’
ज्यान जोगाउने मेसिन बिगारेर सुन्दरता बढाउने मेसिन किन्न १ करोड
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एउटा एमआरआई मेसिन पहिले देखि नै थियो । त्यो मेसिन बिग्रेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मेसिन मर्मतका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्ने र त्यो मर्मत गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । एमआरआई मेसिनबाट निस्केको रिपोर्टले धेरै अवस्थामा बिरामीको ज्यान जानबाट जोगाउँछ । रिपोर्ट हेरेर चिकित्सकहरुले आवश्यक उपचार गर्छन् । तर यस्तो महत्वपूर्ण मेसिन मर्मत गर्न छाडेर अस्पतालले चाहिँ एक करोड हाराहारीमा लेजर मेसिन खरिद गरेको छ । लेजर मेसिनले छालामा भएका मुसा कोठी, चाया पोतो हटाउने काम गर्छ । स्रोत भन्छ–‘ बिरामीको ज्यान जोगाउनुभन्दा बढी महत्वपूर्ण चाहिँ सुन्दरता बढाउनु हो त ? कमिसनको लोभमा कम आवश्यक मेसिन खरिद गरे जस्तो देखियो ।’
अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञहरु डा. रामकृष्ण राज भण्डारी र डा. सञ्जित घिमिरेलाई ‘लेजर मेसिन खरिद गर्न आवश्यक छ’ भनेर सिफारिस गर्न विवस बनाएर सो मेसिन खरिद गरिएको बताइएकोछ ।
अस्पतालमा भएको सिटी स्क्यान मेसिनको स्थिति पनि उस्तै छ । अहिले बजारमा १२८ स्ल्याबका मेसिनहरुबाट सिटी स्क्यान गरिन्छ । प्रहरी अस्पतालमा १० वर्ष पुरानो १६ स्ल्याबको मेसिन छ । मेसिनको स्तर उन्नती भन्दा महत्वपूर्ण कस्मेटिक बनेको छ ।
पिसिआर मेसिन सेकेन्ड ह्यान्ड, मूल्य नयाँकाे
कोभिड महामारीको बेला भारतबाट सेकेन्ड ह्यान्ड पिसिआर मेसिन ल्याइयो । प्रहरी अस्पतालमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने एजेन्टले सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन दियो तर त्यसलाई नयाँ खरिद गरेको भनेर बील तयार पारियो ।
अनुदानको सामाग्रीलाई खरिद गरेको बनाइयो
कोभिड महामारीको बेला अनुदानमा आएका समाग्रीहरुलाई पनि खरिद गरेको भनेर बिल तायर पारिएको स्रोतको दावी छ । पिपिई, मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता धेरै सामाग्रीहरु अभाव भएको बेला विभिन्न संस्थाहरुले अस्पतालहरुलाई अनुदानमा त्यस्ता सामाग्री दिए । तर तिनको हिसाब नै गोलमाल पारिएको स्रोत दावी गर्छ ।
दोहोरो विवरण राख्ने परिपाटी अन्त्य
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने प्रहरीहरुका लागि औषधि निःशुल्क दिने गरिन्छ । निःशुल्क औषधि दिएको कागजी प्रमाणको एक प्रति बिरामीलाई र एक प्रति अस्पताल आफैंले राख्ने गर्छ । यस्तो कागजी प्रमाण भएपछि कति औषधि निःशुल्क वितरण गरियो भन्ने हिसाब स्पष्ट देखिन्छ । अहिलेकी प्रमुख डा. सिंहले कागजी प्रमाण अस्पतालले राख्ने चलन हटाएर कम्प्युटरमा राख्ने बनाएकी छिन् । यो नयाँ व्यवस्थाले नदिएको औषधि पनि निःशुल्क दिएको भनेर थपथाप गर्न सजिलो बनाएको छ ।
प्रहरी अस्पतालमा हिजोआज सर्वसाधारणले पनि उपचार सेवा पाउँछन् । त्यसका लागि निश्चित रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणले उपचार गराए बापत कति रकम संकलन भयो ? भन्ने हिसाब पारदर्शी नभएको बताइन्छ ।
प्रहरी अस्पतालमा कारबाहीको आतंक
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कसैका लागि जसो गरे पनि हुने, कसैले सामान्य त्रुटि गर्दा पनि सजाय पाइहाल्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । टिकट काट्ने फाँटका एक हवल्दार विजय थापाले ५० रुपैयाँको टिकट एक जनालाई निःशुल्क काटिदिए छन् । त्यो अपराधमा उनलाई एउटा सचेत पत्र मात्रै थमाइ दिएको भए पनि पर्याप्त हुन्थ्यो । त्यति भूलको सजाय थापाले नराम्ररी पाएका छन् । उनको ग्रेड रोक्का मात्रै भएन काठमाडौंबाट सिधै दाङ सरुवा गरियो । दाङमा पनि प्राविधिकका लागि कुनै ठाउँ नभएको भन्दै काठमाडौं नै फिर्ता पठाइदियो । अहिले उनी अस्पतालकै प्रशासन शाखामा थन्क्याइएका छन् ।
सन्तोष रेग्मी नामका प्राविधिक असईलाई त अझै अनौठो तरिकाले कारबाही भएको छ । अस्पतालकी प्रमुख आशा सिंहका आफन्त बिरामीको रगत निकाल्दा सुईले अलिकति दुखाएछ । ति बिरामीले सिंह समक्ष ‘रगत निकाल्दा ती असईले दुखाई दिए’ भन्ने गुनासो गरिछन् । त्यसबाट असई रेग्मीको ग्रेड नै रोक्का भयो ।
प्रहरी निरिक्षक नर्स राधा विष्ट सेवा निवृत्त हुँदाको बखत आयोजना गरिएको विदाइ समारोहमा अस्प्तालमा २६ जना तल्लो तहका कर्मचारीहरु उपस्थित हुन सकेनन् । समारोहको प्रमुख अतिथी अस्पताल प्रमुख सिंह नै थिइन् । ‘म प्रमुख अतिथी भएको कार्यक्रममा पनि नआउने को को हुन् ? तिनलाई कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशन सिंहले दिएपछि ती २६ लाई नै कारबाही गरियो । यस्ता औपचारिक सभा समारोहमा नजाँदा पनि कारबाही हुने सम्भवतः नेपाल प्रहरी अस्पताल मुलुककै पहिलो संस्था हो ।
यी समग्र विवादका सम्बन्धमा डा. सिंहको भनाइ यस्तो छः
‘एआइजी हुन नपाएको झोंकमा मेरो अस्पतालका केही अधिकारीहरु पहिले देखि नै म प्रति पूर्वाग्रही भएका छन् । उनीहरुले नै फैल्याएको भ्रम हो भन्ने म ठान्छु । म भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलतामा विश्वास गर्छु, कार्यान्वयन गराउँछु । एमआरआई मेसिन बिग्रेको हो । मर्मत हुनु पर्ने छ । यसमा बजेट आएपछि मर्मत हुने हो । मैले चाहेर मर्मन नगरेको होइन ।
मेरो अस्पतालमा गल्ती गर्नेले सजाय र राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउँछन् । कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको छैन ।’
कर्णालीमा औलो : ३२ बिरामी, छ स्थान उच्च जोखिममा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा पर्ने भित्री मधेसबाट हिमाली भेगसम्म औलो रोगको सङ्क्रमण रहेको पाइएको छ
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रेडक्रसको मर्म र मर्यादाविपरीत हुने गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको छ
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–३ ताम्कुबाट हेलिकोप्टरमार्फत एक सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । सिलिचोङ–३ कोल्वाकी
अर्घाखाँची अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । अर्घाखाँची दिगो विकास केन्द्रले अर्घाखाँची अस्पताललाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।